China Uluhlu olupheleleyo lwee crankshafts zeemoto ze Crankshaft mveliso kunye nabathengisi USAMUWELI
Umzi mveliso wethu unembali engaphezulu kweminyaka engama-30, kunye nezixhobo zokuqhubekeka phambili, iindlela zovavanyo lwenzululwazi kunye nabasebenzi abakumgangatho ophezulu. Inkampani inegama elihle e-Guangdong, e-Xijiang, e-Jiangsu nakwezinye iindawo. Sinenkqubo yenkonzo epheleleyo emva kokuthengisa kwaye sinikezela ngeenkonzo ezikhawulezayo nezikhathalayo.
Sivelisa uluhlu olupheleleyo lwee-crankshafts ezivela ePerkins, Renault, Toyota, Volkswagen, Beijing Hyundai, Isuzu, njlnjl. Inkampani iyaqhubeka nokwenza iimveliso ezintsha ukuhlangabezana neemfuno ezahlukeneyo zabathengi. Wamkelekile ukubuza kwaye undwendwele umzi-mveliso ukuze ufumane isikhokelo.
Iminyaka engamashumi amathathu yobuchwephesha bemveliso yobuchwephesha kunye namava, ulawulo lwenzululwazi nolungqongqo, inkqubo esemgangathweni yokuqinisekisa kunye nomgangatho ophezulu emva kwenkonzo yentengiso sisiseko sokuphumelela ukuthembela kwabathengi.
Inkampani yamkela ngokunyanisekileyo abahlobo abatsha nabadala kunye nabathengi ekhaya nakumazwe aphesheya ukuba bafezekise intsebenziswano eyahlukeneyo yezoqoqosho, ezobugcisa kunye nezorhwebo.
Izinto zenziwe ngesinyithi esomeleleyo esomeleleyo kunye nokunyangwa ngobuchwephesha bokomeleza ityhubhu yokuphucula amandla okudinwa kwe-crankshaft.Ifanelekile iimoto, iinqanawa, izithuthi zobunjineli, oomatshini bezolimo, iseti yomvelisi, umgangatho wokuqala, ngenkangeleko entle, Ukuxinana okuphezulu, ukutyibilika, ukukhanya nokuqina emva kokugqiba. Imveliso nganye iye yavavanywa ngokungqongqo kwaye umgangatho wayo uqinisekisiwe. Ukupakishwa kwebhokisi kunembonakalo elungileyo kunye nomjikelo wemveliso ozinzileyo: iintsuku ezingama-20 ukuya ku-30 ​​zomsebenzi, ukupakisha okungathathi hlangothi / ukupakisha kwasekuqaleni, indlela yothutho: umhlaba, ulwandle kunye nomoya.
tensile Strength 700-2 （mPa）
Ukudibanisa 2 （%）
Iimodeli zemoto ezifanelekileyo Itoyota
Ubungakanani bephakheji 50X16X16
Impembelelo yamandla 230 （J / c㎡ ㎡
Ukuncipha kwecandelo 33 （﹪）
Ukuqhagamshela ubungakanani bomngxuma wentonga 43
Umgama osembindini wentonga yokuqhagamshela 43.5 （mm）
Egqithileyo Isiphelo seCamshaft
Okulandelayo: Umgangatho ophezulu wemoto Flywheel
Injini yokuphosa i-Crankshaft yePerkins135 nge ...